fundition – @mmunited
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ပိုစ့်တုန်းကလဲ ပံ့ပိုးပေးမဲ့သူတွေနည်းနေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စစချင်းထက်တော့ပိုကောင်းလာပါတယ်။ SBI share ၃ခုရှိပါတယ်။ @feedyourminnows ဆီက upvote ကတော့ ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ @ptcmyanmar ဆီကနေ ၁၀၀ SP ရထားပါတယ်။ Upvote share တစ်ခု ရယူဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုလို လုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာ @steempress-io ရဲ့ ကူညီမှုတွေက အများကြီး အရေးပါပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ @minnowsupport, @hr1 စတဲ့သူတွေရဲ့ ကူညီပေးမှုတွေကိုလဲ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ မြန်မာထဲကဆိုရင်တော့ @mamamyanmar, @myothuzar, @khaylay, @ptcmyanmar, @yee900, @sanhtun, @aggamun တို့ရဲ့ ကူညီမှုကို လဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး ထားခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ SP ၅၀၀ …
There are onlyafew supporters for this project for the week 1 but it will be better for the next week. I have3shares of SBI and got daily upvote from @accelerator. Thanks to @paulag and @simplymike for sbi shares. I got 100 delegated SP from @ptcmyanmar for this project. @mshahabi, @minnowsupport, @ccir105, …